किराले खाएको दाँत कसरी पार्ने निको ? जान्नुहोस् यि तरीका – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २१, २०७८ समय: १९:५६:१३
दाँत स्वास्थ्य र सौन्दर्य दुबैको लागि अति महत्वपूर्ण अंग हो । यसलाई स्वस्थ, सफा र सुन्दर राख्ने सबैको चाहाना हुन्छ । नचाहाँदा नचाहाँदै पनि विविध कारणले दाँतमा समस्या आउँछ । अधिकांशमा दाँतमा आउने समस्या मध्ये एक हो किरा लाग्ने र दुख्ने । दाँतमा किरा लाग्ने र दुख्ने किन हुन्छ ? यस्तो समस्याबाट छुटकारा पाउन के गर्ने ? दन्त रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजिब सिंह
दाँतमा लाग्ने रोगलाई हामी सामान्य रुपमा लिन्छौ । दाँत सुन्दरताको लागि मात्र हो भन्ने धेरैको सोचाई छ । तर बेलैमा उपचार नगरे दाँतमा लाग्ने रोगले क्यान्सरसम्म हुने गर्दछ । दाँत तीन तहले बनेको हुन्छ । चिकित्साशास्त्रमा पहिलो बाहिर देखिने सेतो भाग, जसलाई इनामेल भनिन्छ । इनामेल भन्दा भित्रको भाग डेन्टिन र डेन्टिन भन्दा भित्रको भाग जसलाई पल्प भनिन्छ । पल्प दाँतको सबै भन्दा कमजोर र संवेदनशील भाग हो जहाँ रक्तसंञ्चार हुन्छ । मुख भित्र विभिन्न किसिमका व्याक्टेरिया हुन्छन् ।
हामीले खाएको खाना दाँतमा बसिरहँदा त्यस्ता व्याक्टेरियाले एसिड उत्पन्न गर्छ र यसले बिस्तारै किरा लाग्न सुरु हुन्छ । दाँतमा किरा लाग्ने धेरै कारणहरु छन् । जस मध्य दाँतलाई फोहोर राख्नु वा खाना खाए पछि ब्रस नगर्नु । जिब्रो तथा मुख राम्ररी सफा नगर्नु । वंशाणुगत गुण आदिले किरा लाग्छ । दाँत सिरिङ्ग हुने । खाएको कुरा दाँतमा अडकने । दाँत दुख्ने । दाँतमा इनामेलको भाग हराएर कालो देखिने । चपाउन गाह्रो हुने लक्षण देखिएमा दाँतमा किरा लागेको हुनसक्छ । दाँतमा किरा लाग्न नदिन दाँत सफा राख्नु पर्छ ।
बच्चा उमेर देखि नै ब्रस गर्न सिकाउने । सानो बच्चालाई आमाको दुध वा केही पनि चिज खाएपछि सफा नरम कपडाले गिजा, दाँत सफा गरिदिने । कम्तीमा ६ महिनामा एक पटक दन्त चिकित्सककोमा दाँतको परीक्षण गराउँदा यस्तो समस्याबाट बच्न सकिन्छ । किराले खाए पछि दाँत दुखाई पनि हुन्छ । दुखाई कम गर्न धेरैले खैनी, ल्वांको तेल लगाएतका कुरा हाल्ने गर्छन् । यसले क्षणिक रुपमा समस्या समाधान भएको अनुभूति भएपनि दिर्घकालिन रुपमा भने समाधान हुँदैन ।
दाँत दुखाइको पीडा न्यून गर्न लसुन एउटा आयुर्वे्दिक औषधि हो । लसुनमा हुने एलिसिन नामक तत्वले दाँतको पीडा निको पार्छ । दाँत दुखेको ठाउँमा लसुनको पेस्ट लगाउँदा दुखाई कम गर्छ ।
ल्वाङको तेलमा एन्टिब्याक्टेरियल तत्व हुने भएकाले दुखाइ कम गर्छ । तेलमा हुने इयुजेनोल नामक तत्वले दाँतको संक्रमण कम गर्छ । कटनमा दुई–तीन थोपा तेल मिसाएर दुखेको ठाउँमा लगाउँदा दुखाई कम गर्छ ।
काँक्रोमा दुखाई शान्त पार्ने तत्व हुने भएकाले दाँत दुखाईमा यो उपयोगी हुने आयुर्वेदमा उल्लेख छ । काँक्रोको गुदी दुखेको ठाउँमा राख्दा वा काँक्रो खाँदा दुखाई कम गर्छ ।
अशोक वृक्षको बोक्रा:
त्यसो त तुलसीको पातका फाइदाका बारेमा आर्युवेदमा धेरै वर्णन गरिएको पाइन्छ । तुलसीको पातलाई तोरीको तेलमा मिसाएर दुखेको ठाउँमा लगाउँदा दुखाई कम गर्छ । अदुवा स् धेरै रोगको उपचारमा प्रयोग हुने अदुवा दाँतको दुखाई कम गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ । अदुवालाई थिचेर दुखेको भागमा लगाउँदा यसले दुखाई कम गर्छ ।
२३५३ पटक हेरिएको